Shan Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Man United Guuldarada Kala Kulantay Watford - Wargane News
Home Sports Shan Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Man United Guuldarada Kala Kulantay...
Manchester United ayaa waxaa soo gaartay guuldaradii 3aad oo isku xigta tartamada oo dhan muddo isbuuc gudaheed ah, iyadoo kooxda Watford ay maanta guuldarro 3-1 kala kulmeen, waxaa uga sii horeysay guuldarro 1-0 oo ka soo gaartay Feyenoord iyo 2-1 oo ay ka soo gaartay deriskooda Manchester City.
Iyadoo Leciester City, Liverpool iyo Chelsea ay yihiin seddex ka mid ah afarta kulan ee soo socota ee Manchester United ee horyaalka Premier League, waxa ay u muuqataa in tababare Mourinho inay sugeyso howl adag.
Hadaba waxaan eegeynaa shan waxyaabood oo laga bartay kulankii maanta.
1. Hoos u Dhaca Rooney Oo Weli Socda.
England ay la ciyaartay Slovakia, Rooney ayaa gadaal u degsan khadka dhexe, waxaana uu ku dhibtoonayaa inuu kubada isku toosiyo.
2. United Weli Burhaantii Ayaa ka Maqan.
yaqiinay ee xitaa haddii ay si xun u ciyaaraan guul la soo hooyan jirtay.
3. Pogba Waa Inuu Shaqo Intaan Ka Badan Qabto
Laakiin ciyaartiisa waxa ay muuqatay kaliya mar dhif iyo naadir ah, United waxa ay u baahan tahay inay awood ku yeelato khadka dhexe.
4. Capoue Shabaqa waa laga celin la’ yahay.
gool shan kulan uu saftay xilli ciyaareedkan Premier League.
5. Young Oo soo Dhaweyn ka Helay Jamaahiirta Martida loo Yahay.
Ashley Young ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee Premier League ee soo dhaweyn fiican ka hela taageerayaasha kooxaha kale marka loo eego taageerayaasha kooxdiisa.
Iyadoo taageerayaasha United ay mar walba yihiin kuwa dhaleeceeyay xiddiga garabka ka ciyaara, taageerayaasha Watford ayaa ciyaaryahankoodii hore u sarre joogsaday markii uu bedel ku soo galayay qeybtii hore.
Wargane TV: Xisbiga UCID oo Xafiisyo Cusub Ka Furtay Hargeysa.